डा. शान्ति : कोरोना अस्पतालमा काम गर्न आफ्नो का'खे छोरी माइतीमा छो'डे'र रातदिन ख'टिएकी छिन् - Filmy News Portal Of Nepal
डा. शान्ति : कोरोना अस्पतालमा काम गर्न आफ्नो का’खे छोरी माइतीमा छो’डे’र रातदिन ख’टिएकी छिन्
दुई बालबालिका माइतीमा छा’डेर डा. शान्ति भुर्तेल नेपालले यतिबेला भरतपुर कोरोना वि’शेष (अस्थायी) अस्पतालको ने’तृत्व गरिरहनुभएको छ । भरतपुर अस्पताल मातहतमा कोरोना अस्पताल आएपछि वैशाख १० गतेबाट सो अस्पतालको प्रमुख उहाँलाई तो’किएको छ । कपिलवस्तुको वाणगङ्गा स्थायी घर भएकी डा. शान्तिको माइती भरतपुरमै छ ।
माइतीमा तीन वर्षीया छोरी आरभी र नौ वर्षीय छोरा आरभलाई राखेर उहाँ भने कोरोना अस्पतालमा खटिरहनुभएको छ । सासु–ससुराको नि’धनपछि श्रीमान् डा. धिरेन्द्र नेपालको गत वर्ष नि’धन भएसँगै परिवार आफैँले सम्हाल्दै आउनुभएकी डा. शान्ति परिवारको व्यवस्थापनसँगै आफ्नो जिम्मेवारीमा खटिरहनुभएको छ । कोरोना अस्पतालमा केही दिनयता स्वाब स.ङ्कलन गर्न छा.डे पनि त्यहाँ रहेका चार स.ङ्क्रमितको चौबीसै घण्टाको व्यवस्थापन उहाँको था.प्लोमा छ ।
उनीहरुको खानपानदेखि स्वास्थ्योपचार मात्र होइन, त्यहाँ कार्यरत २७ कर्मचारीको खानपान र बसोबासको व्यवस्थापन उहाँ आफैँले गर्दै आउनुभएको छ ।
उच्च जो’खिममा काम गर्नुपर्ने भए पनि स.ङ्क्रमित निको पार्न र स’ङ्क्रमण रोक्नसार्नबाट उहाँको व्यवस्थापन प्रभावकारी देखिन्छ । दैनिक स’ङ्क्रमितसँग टेलिफोन र भिडियोकलबाट उनीहरुको अवस्था उहाँले बुझ्ने गर्नुहुन्छ ।
कुनै स’मस्या भएमा त’त्काल स’माधान गर्ने उहाँको दैनिकीमा पर्दछ । उहाँले भन्नुभयो, “दिउँसो त म अस्पतालमै हुन्छु, साँझ–बिहान जतिबेला स’मस्या पर्छ त्यतिबेला यहाँ आउँछु । खानादेखि औषधिसम्मको चाँ’जोपाँ’जो आफैले मिलाउनुपर्ने भएकाले चौबीसै घण्टा ध्यान अस्पतालमा नै हुने उहाँले बताउनुभयो । डा. शान्ति बिरामी थपिँदै गर्दा अस्पतालमा गर्ने व्यवस्थापनको पूर्वतयारीमा यतिबेला जु’टिरहनुभएको छ ।
गुनासो कसैको नआउने गरी व्यवस्थापनमा जु’टेको छु”, उहाँले भन्नुभयो ‘स’ङ्क्रमितलाई सकेसम्म छिटो स’ङ्क्रमणमुक्त भएर फर्काउन सकियोस् भन्ने चाहना छ । स’ङ्क्रमितसँग प्रत्यक्ष काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको निर्देशिकाअनुसार काम गराउन उहाँ तल्लीन हुनुहुन्छ । जसका कारण स’ङ्क्रमण उनीहरुलाई नफैलियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ अस्पतालमा काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले नेतृत्व गरेपछि अस्पतालले झण्डै ६०० जनालाई सेवा दिइसकेको छ ।
अस्पतालको नेतृत्व गरिरहँदा स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी होटलको क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन् भने उहाँ अस्पतालकै आवासको क्वारेन्टिनमा बस्दै आउनुभएको थियो । दुई दिनअघि स्वाब परीक्षण गरी अहिले रातको समयमा छोराछोरीसँगै माइतमा बस्दै आउनुभएको छ । माइतीका हजुरआमा, बुबा, आमा, बहिनी ज्वाइँ सबैको साथ र सहयोगकै कारण आफू अस्पतालमा ख’ट्न पाएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले स’ङ्क्रमण सर्न नपाओस् भनेर सावधानी अपनाएरै काम गरेको बताउनुभयो । ‘स’ङ्क्रमित थपिँदै गर्दा उहाँ फेरि क्वारेन्टिनमै बस्नुपर्ने छ’, उहाँले भन्नुभयो, “यो स’ङ्कटको समयमा पारिवारिक पी’डा र स’मस्या पन्छाएर स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक कार्यक्षेत्रमा ख’टिएनौंं भने कसले उपचार गर्छ ।” एनेस्थेसियाका नवौ तहकी भुर्तेल छोटो समयमा विभिन्न अस्पतालको अ’नुभ’व हासिल गरिसक्नुभएको छ ।
उहाँले अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा भोजराज अधिकारी, प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. श्रीराम तिवारी, डा. प्रमोद पौडेल, मेट्रोन शान्ता भण्डारी, शान्ति सापकोटालगायत सम्पूर्ण कर्मचारीको साथ र सहयोगका कारण काम गर्न आफूलाई सहज भएको बताउनुभयो । भरतपुर अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट तिवारी डा. भुर्तेलले कोरोना अस्पतालको व्यवस्थापन प्र.भा.वकारी ढङ्गले गरिरहेको बताउनुभयो ।
अहिलेको परिस्थितिमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीमा जिम्मेवारी उ.च्च भएको भन्दै सबैले आ–आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेमा स’ङ्क्रमणबाट जो’गिन सकिने उहाँको भनाइ छ । परिवारिक पी’डा भुलेर राष्ट्र र जनताका लागि सबैले डा भुर्तेल झैँ जो’खिम मोलेर राष्ट्र सेवामा समर्पित हुने बेला आएको छ । – नारायण अधिकारी